သတင်း - ပေါက်ခါစ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ နဲ့ သားဖောက်တဲ့စက်က သားဖောက်ဖို့ ဘယ်နှစ်ရက်လိုသလဲ
1.Temperature- အပူချိန် 34-37°C တွင်ထားပါ၊ ကြက်၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် အပူချိန်အတက်အကျသည် အလွန်ကြီးမားမနေသင့်ပါ။
2. စိုထိုင်းဆ- နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 55-65% ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီမှာ စိုစွတ်နေတဲ့ အမှိုက်တွေကို အချိန်မီ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ပါတယ်။
၃။ အစာကျွေးခြင်းနှင့် သောက်သုံးခြင်း- ဦးစွာ ကြက်များကို 0.01-0.02% potassium permanganate aqueous solution နှင့် 8% sucrose water တို့ကို သောက်ပေးပါ။ သောက်သုံးရေသည် ရေနွေးနွေးကို ဦးစွာသောက်ရန် လိုအပ်ပြီး သန့်ရှင်းသောရေအေးသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲပါ။
၁။ ပေါက်ခါစကလေးတွေကို ဘယ်လိုကျွေးမလဲ။
(၁) အခွံမှထွက်လာသော ကြက်များသည် အမွေးကျဲပြီး အမွေးတိုကာ အအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် အပူကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အပူချိန် ၃၄ မှ ၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ထားရှိနိုင်ပြီး အအေးကြောင့် ကြက်များစုပုံခြင်းနှင့် သေဆုံးနိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
(၂) သတိပြုရန်- ကြက်၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေရန် လွယ်ကူသော အပူချိန်အတက်အကျသည် အလွန်ကြီးမနေသင့်ပါ။
(၁) သားပေါက်အိမ်၏ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၅၅-၆၅% ဖြစ်သည်။ စိုထိုင်းဆနည်းလွန်းပါက ကြက်၏ကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူမပြုသော ရေကို စားသုံးမိလိမ့်မည်။ စိုထိုင်းဆများလွန်းပါက ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားလွယ်ပြီး ကြက်များကို ရောဂါကူးစက်စေပါသည်။
(၂) မှတ်ချက်- ယေဘူယျအားဖြင့် မိုးရာသီတွင် စိုထိုင်းဆများလွန်းသောအခါတွင် အမှိုက်ထူထပ်ပြီး စိုစွတ်သောအမှိုက်များကို အချိန်မီ သန့်ရှင်းပေးပါ။
3. အစာကျွေးခြင်းနှင့် သောက်ခြင်း။
(၁) အစာမကျွေးမီတွင် သေးငယ်သော သတ္တုနီယမ်ကို သန့်စင်ရန်နှင့် အူနှင့် အစာအိမ်တို့ကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် 0.01-0.02% ပိုတက်စီယမ်နိတ်ရေကို သောက်နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် 8% sucrose ရေကို တိုက်ကျွေးကာ နောက်ဆုံးတွင် ကျွေးနိုင်ပါသည်။
(၂) သားပေါက်ငယ်အဆင့်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားသောက်နိုင်ပြီး အရေအတွက်ကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချပါ။ အသက် 20 အရွယ်တွင် ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်နေ့4ကြိမ် လုံလောက်ပါသည်။
(၃) သောက်သုံးရေကို အရင်ဦးစွာ ရေနွေးနွေးသုံးပြီး သန့်ရှင်းသောရေအေးအဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ မှတ်ချက်- ကြက်အမွေးများကို စိုစွတ်စေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် အသက် ၁ ပတ်အတွင်း ကြက်များသည် အလင်းရောင်ကို ၂၄ နာရီ ထိတွေ့နိုင်သည်။ 1 ပတ်အကြာတွင် ရာသီဥတု ကြည်လင်ပြီး အပူချိန် သင့်လျော်သည့် နေ့တွင် သဘာဝအလင်းရောင်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် နေရောင်နှင့် ထိတွေ့ရန် အကြံပြုထားသည်။ ဒုတိယနေ့တွင် မိနစ် 30 ခန့် ထားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ချဲ့ပါ။
2. ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲ။ ပေါက်ဖွားသည်။ ကြက်များကို သားဖောက်ရန်၊
အကောင်ပေါက်ရန် ၂၁ ရက်ခန့် ကြာတတ်သည်။ ပေါက်ဖွားသည်။. သို့ရာတွင် ကြက်မျိုးစိတ်များနှင့် သားပေါက်အမျိုးအစားများကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ပေါက်ဖွားသည့်အချိန်ကို ပကတိအခြေအနေအရ သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၁) အဆက်မပြတ် အပူချိန် ပေါက်ဖွားခြင်းနည်းလမ်းကို နမူနာအဖြစ် ယူ၍ အပူချိန် ၃၇.၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
(၂) ပေါက်ဖွားပြီး ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်း စိုထိုင်းဆသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 60-65%, 8-18 ရက်များ၏ စိုထိုင်းဆမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 50-55%, နှင့် 19-21 ရက်တို့၏ စိုထိုင်းဆမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 65-70% ဖြစ်သည်။
(၃) သားဥမဥကို ၁-၁၈ ရက်အလိုတွင် မလှန်ပါ၊ ၂ နာရီခြားတစ်ကြိမ် ဥလှည့်ပါ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန် အာရုံစိုက်ပါ၊ လေထဲတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုသင့်ပါ။
(၄) ဥများကို အခြောက်လှန်းခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ဥများကိုလှန်ခြင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ပေါက်ဖွားမှု အခြေအနေများ သင့်လျော်ပါက ဥများကို ခြောက်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ပူပြင်းသော နွေရာသီတွင် အပူချိန် 30 ℃ ကျော်လွန်ပါက ဥများကို လေထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၅) ပေါက်ဖွားစဉ်အတွင်း ဥများကို ၃ ကြိမ် ထွန်းညှိပေးရပါမည်။ ဥဖြူဥကို ၅ ရက်မြောက်နေ့မှာ ပထမအကြိမ် ထွန်းညှိပြီး ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ ဥညိုရောင်ကို ဒုတိယအကြိမ် ၁၁ ရက်မှာ ထွန်းညှိကာ တတိယအကြိမ် ၁၈ ရက်မှာ ထွန်းပါတယ်။ ဘုရားသခင်၊ မျိုးမပွားနိုင်သောမျိုးဥများ၊ သွေးသံဥများနှင့် သုတ်ပိုးသေမျိုးဥများကို အချိန်မီ ရွေးထုတ်ပါ။
(၆) ယေဘူယျအားဖြင့် ဥခွံများ ကိုက်လာသောအခါတွင် ဥများကို သားပေါက်ခြင်းတောင်းထဲတွင် ထည့်ကာ ခြင်းတောင်းထဲတွင် ပေါက်တတ်ပါသည်။